Warar - Ahmiyadda ay u leedahay Baakadaha
Baakadaha Alaabada waxaa loo gudbiyaa kartoonada, sanduuqyada, boorsooyinka, finanka, waxyaabaha la gelinayo, istiikarada iyo sumadaha iwm.
Baakadaha Alaabtu waxay bixin karaan difaac ku habboon si looga hortago in badeecooyinka waxyeelloobaan inta lagu guda jiro gaadiidka, keydinta iyo iibinta.
Ka sokow shaqada ilaalinta, baakadaha wax soo saarka ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara qurxinta alaabta, kor u qaadista astaanta, la kulanka macaamiisha baahiyaha bilicsanaanta iyo dalabaadka nafsaaniga ah ugu dambeyn waxay dardargeliyaan horumarka iibka.
Baakadaha alaabtu waa waayo-aragnimada muuqaalka ah ee sheyga; Hadalka astaamaha alaabta; Soo bandhigida muuqaalka shirkadaha iyo meelaynta.
Baakadaha alaabada si wanaagsan loo qaabeeyey waa hab muhiim ah oo faa'iido looga helayo shirkad. Jaangooyn istiraatiiji ah oo sax ah oo waafaqsan iswaafajinta baakidhka cilmu-nafsiga macaamiisha ayaa ka caawin kara shirkadda inay ka dhex muuqato koox magacyada tartameyaasha ah ayna ku guuleystaan ​​sumcad wanaagsan.
Sharciyada DuPont ayaa tilmaamaya in 63% macaamiisha ay gaareen go'aanadooda iibsashada sida ku cad baakada alaabada. Tan darteed, dhaqaalaha suuqa maalmahan sidoo kale badanaa loogu yeero dhaqaajinta dareenka. Kaliya calaamadda indhaha qabata iyo baakadaha ayaa la aqoonsan karaa oo macaamilku aqbali karaa una beddelaa iib.
Sidaa darteed, dhammaan shirkaduhu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan hawsha baakadaha ee sumadda.
Badeecad kastaa waxay leedahay baakado u gaar ah, iyo noocyada waaweyn xitaa lacag ugama timaado naqshadaynta baakadka ugu habboon badeecooyinkeeda.
Sida iska cad, baakaduhu waa u muhiim wax soo saarka:
Baakaduhu Waa Nooc Awood Iib ah.
Maanta, Suuqa waxaa ka buuxa alaabooyin kala duwan, u fiirsashada badeecad waliba aad ayey u gaaban tahay, baakaduna waa inay qabataa oo ay qabataa macaamilka markay il-duuf ku eegaan khaanadaha. Kaliya baakadaha si guud u adeegsaday Naqshadeynta, Midabka, Qaab, Waxyaabaha matalaya macluumaadka Badeecada, Nooca iyo Fikradda Shirkadda iyo Dhaqanka, ayaa soo jiidan kara macaamilka oo macaamiisha siin kara aragti wanaagsan oo ku saabsan badeecada iyo astaamaha, ka dibna u horseeda ficil iibsi .
Baakaduhu waa awoodda iibinta ee qaadaysa mas'uuliyadda koowaad ee soo jiidashada macaamiisha.
Baakadaha waa nooc Awood Aqoonsi ah.
Marka baakaduhu si guul leh u soo jiitaan macaamilka oo ay fiirsadaan dareenkooda, baakaduhu markaa waa inay lahaadaan hawl ay ku soo gudbinayaan qeexitaanka alaabta iyo astaamaha.
Baakadaha alaabtu uma baahna oo keliya muuqaal raaxo leh oo si fiican loo qaabeeyey laakiin sidoo kale waxay ku hadli kartaa badeecada.
Waxqabadka suuqa waxsoosaarku wuxuu kuxiranyahay sida wanaagsan ee baakaduhu u soo bandhigaan sifooyinka alaabta iyo macluumaad faahfaahsan.
Baakaduhu Waa Nooc Awood Nooca Sumaynta ah.
Baakaduhu waxay leeyihiin shaqada Suuqgeynta iyo Magaca. Taasi waa in la yiraahdo, baakaduhu waxay muujin karaan macluumaadka astaanta; dhiso aqoonsiga oo u oggolow macaamilka inuu fahmo Magaca Calaamadaha, Hantida Nooca, sidaasna ku abuur sawir sumadeed.
Qaab dhismeedka calaamadeynta, baakadaha sidoo kale waxaa loola dhaqmi karaa sida mid ka mid ah ilaha Sawirka Sawirka.
Baakadaha oo ah soo bandhigid muhiim ah oo ah badeecada, waxay dhabarka u ridanaysaa mas'uuliyadda dareenka ah in shirkaddu rabto inay siiso macaamilka.
Baakaduhu waa door weyn oo ku saabsan kala soocida badeecada. Waxay abuuri kartaa astaamaha sumadda iyada oo tan macaamiisha ay soo jiitaan oo iibka la sameeyo.
Baakaduhu Waa Nooc Awood Dhaqameed.
Qalbiga baakaduhu kuma eka kaliya muuqaalka kore iyo muuqaalka, laakiin sidoo kale waxay ka dhisantaa isku darka dabeecadda qofka iyo dabeecadda jeclaanta.
Baakaduhu waxay si hufan u tusi karaan wax soo saarka iyo ganacsiga Dhaqankiisa
Baakadaha waa nooc Awood isku xirnaan ah.
Baakadaha Alaabtu waa mid u janjeedha macaamiisha, waxay la kulmi kartaa dalabaadka kala duwan ee macaamilka, isla markaana waxay keenaysaa awoodda isku xidhka macaamiisha.
Iskusoo wada duuboo, baakadaha ayaa la siiyay hawlo badan iyo ka badanba.
Baakaduhu waxay ka ciyaaraan door aad iyo aad muhiim u ah suuqgeynta iyo sumadeynta.